Costa Azahar - Nharaunda yeValencian - Spain
Welcome to Costa Azahar
Zita rayo rinouya kubva maruva orenji, maruva orenji uye chirimwa chequessessential chedunhu.
Iwo mataundi ari kuCosta del Azahar (kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba) ndeaya: Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Torreblanca, Cabanes coast, Oropesa del Mar, Benicasim, Castellón de la Plana, Almazora, Burriana, Nules, Moncófar , Chilches, La Llosa naAlmenara.
Misoro yaro yepamusoro-soro ndiwo maguta eBenicasim nePeñíscola, sezvo aya mamasipala ari iwo makuru evashanyi nharaunda.
Kune zvekare mutambo wakakura wekushanya kumahombekombe eCastellón, nemimhanzi inopa seArenal Sound Mutambo (Burriana), muBenicássim iyo Benicasim International Festival, iyo Rototom festival uye SanSan pakati pevamwe. Iyo Electrosplash Music Mutambo pamhenderekedzo yeFora-Forat de Vinaroz.
Mhenderekedzo yegungwa inosanganisira nzvimbo dzekumahombekombe egungwa dzeVinaroz, Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicasim neMoncófar, asiwo Sierra de Irta, nzvimbo ine makomo yakafanana negungwa.
Tinogona zvakare kutaura nezve madota ePrat Cabanes-Torreblanca Natural Park, iyo Deserto de las Palmas, pamwe neColumbretes Islands dura rekuchengetedza 56 km kubva kumahombekombe. Pakupedzisira, hatigone kukanganwa guta guru rematunhu: Castellón de la Plana uye guta rakasimbiswa reMascarell.
ICosta del Azahar yakarongedzwa neA-7 uye AP-7 migwagwa mikuru inobatanidza matunhu ese makuru uye kuabatanidza neValencia kumaodzanyemba uye Tarragona kuchamhembe. Iyo N-340 inomhanyawo pamwe chete nemhenderekedzo yakafanana.
Kubva mukati mayo inowanikwa nyore neA-3 ichibva kuMadrid uye neA-23 ichibva kuTeruel neZaragoza.
Nemhepo, iyo mahombekombe inoshandiswa neCastellón Airport.
- Benicar izvozvo
Yakagadziridzwa na IbizaCreate